ကြိုပွိုင့်စနစ် အားနည်းလာပြီလား ? - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ကြိုပွိုင့်စနစ် အားနည်းလာပြီလား ?
12 Jun 2019 12:38 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
1029 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
ယနေ့ အိမ်ခြံမြေ လောကအတွင်းမှာ ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ဝယ်ယူလာကြတဲ့ အရစ်ကျ ဝယ်ယူမှု ပုံစံတွေ ခေတ်စားလာပြီး ပိုင်ဆိုင်ဖို့ခိုင်မာမှုအားနည်းတဲ့ ကြိုပွိုင့်စနစ်ကတော့ တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်နည်းပါးလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင်တွေဆီက သိရပါတယ်။
“ကြိုပွိုင့်စနစ်အရောင်းအဝယ်နည်းလာတာက တိုက်ခန်းအရောင်းအေးနေတာနဲ့ သက်ဆိုင်နေပြီး ဆောက်လုပ်ပြီးသားတိုက်ခန်းတွေကို မျက်မြင်ဝယ်နိုင်တာတွေ၊ ဈေးကွက်ထဲဆောက်လုပ်ပြီးသား တိုက်ခန်းရောင်းချမှုများပြားနေတာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ် ” လို့ မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမြင့်က ပြောပါတယ်။
တိုက်ခန်း ဈေးတက်ချိန်ကဆိုရင် ကြိုပွိုင့်က ကောင်းတယ်။ မပြီးခင်ဝယ်ရင်ဈေးသက်သာတယ်။ ပြီးမှ ဝယ်ရင်ဈေးတက်တယ်။ ခုချိန်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တွေကလည်းသိပ်မကောင်းတော့ ကြိုပွိုင့် ဝယ်ထားရင် စိတ်ပူရတာတွေလည်းရှိတာကြောင့် ဆောက်လုပ်ပြီးသား တိုက်ခန်းတွေကိုပဲ ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Home loan တွေယူပြီး ဝယ်လာကြတာ တွေများလာတယ်လို့ ဦးမျိုးမြင့်က ဆက်ပြောပါတယ်။
ကြိုပွိုင့်စနစ်က လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ နည်းပါးလာတာဖြစ်ပြီး နေရာကောင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့ကန်ထရိုက်တာ တွေ ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ရ မယ့် တိုက်ခန်းတွေဆိုရင်တော့ ကြိုပွိုင့်ဝယ်ယူတာတွေရှိ နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ အရစ်ကျတွေမရခင်အချိန်တွေကဆိုရင် ကြိုပွိုင့်ဝယ်ယူမှုက အားကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ဆောက်လုပ်ပြီးတိုက်ခန်း တွေကလည်း ပေါများနေသလို ဘဏ်တွေနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ဝယ်နိုင်တာကြောင့် ဝယ်သူတွေက မျက်မြင်ဆောက်လုပ်ပြီးသား တိုက်ခန်းတွေကိုသာစိတ်ကြိုက်ဝယ်လာကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရစ်ကျစနစ်ကတော့ ဈေးပိုပေးရတာတွေရှိတော့ စိတ်ချရတဲ့ကန်ထရိုက်တာတွေ၊ ကိုယ်ကလည်း နေထိုင်ဖို့ အလျင်မလိုအပ်သေးတဲ့ သူတွေဆိုရင် ဈေးသက်သာတဲ့ ကြို ပွိုင့်ဝယ်ယူကြပါတယ်။ ကြိုပွိုင့် သိန်း ၈ဝဝ တန် ၊ သိန်း ၉ဝဝ လောက်တန်တဲ့ တိုက်ခန်းက အရစ်ကျနဲ့ဝယ်ရင် သိန်း ၁ဝဝဝ လောက်ရှိတော့ ကြိုပွိုင့် ဝယ်သူရှိနေပါသေးတယ်။
လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ဈေးကွက်အတွင်း ဝယ်ယူမှုအားနည်းနေတာကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကျဆင်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက် ငွေလိုနေပါသလား။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလား။ အိမ်ရာချေးငွေ ရှိတယ်လေ။ အိမ်ရာချေးငွေ (Home Loan Application) လျှောက်ထားရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
ဆောက်လုပ်ရေး တိုက်ခန်း ချေးငွေ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ဘဏ် အဆောက်အအုံ ကြိုပွိုင့် အရောင်းအဝယ် အိမ်ခြံမြေ အရစ်ကျ